किन नेपालका सबै संक्रमितलाई अक्सिजन चाहिएको छ? « AayoMail
काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो अस्पतालका चिसो भुइँमा सुतिरहेका छन् कोरोना संक्रमित। अस्पतालका सबै बेड भरिभाउ छन्।
बेड नहोस् ठीक छ, संक्रमित पुकार गरिरहेका छन्– अक्सिजनमात्रै भए हुन्छ। कहाली लाग्दा यस्ता दृश्यले काठमाडौंका सबैजसो कोरोना अस्पतालहरूबाट गिज्याइरहेका छन्।
चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पताल भर्ना भएका ९८ प्रतिशत बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ।
सास बचाउनका लागि अक्सिजन पखाईमा छन् संक्रमित। अस्पतालको चिसो भुइँ र कुर्सी बेन्चमै मृत्युसँग लडिरहेका छन्।
केही दिनयता देशभर अक्सिजनको हाहाकार छ।
उपत्यकाका निजी अस्पतालले विज्ञप्ती निकाल्दै अक्सिजनको अभाव भएकाले बिरामी लिन नसक्ने घोषणा गरिरहेका छन्। दैनिक अक्सिजनकै अभावले संक्रमितको ज्यान गइरहेको छ।
अब अक्सिजनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)ले लिएको छ।
त्यसका लागि सिसिएमसीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एउटा टास्कफोर्स पनि बनाएको छ।
धेरै संक्रमितलाई किन अक्सिजनको आवश्यकता परिरहेको छ?
कोरोना दोस्रो लहर अघिल्लोभन्दा निकै घातक छ। यो लहरको फैलावटसँगै अक्सिजनको माग थेग्नै नसक्नेगरी बढिरहेको छ।
टेकु अस्पतालका डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार कोरोना भाइरसले फोक्सोमा असर गर्ने हुँदा संक्रमितको फोक्सोले राम्रोसँग काम गर्न सकेको हुँदैन। त्यसकारण फोक्सोलाई सहयोग गर्नको लागि अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ।
फोक्सोमा संक्रमण हुँदा श्वास–प्रश्वासमा समस्या हुन्छ। जसका कारण निमानिया भई फोक्सोमा तरल पदार्थ जम्मा हुन्छ र फोक्सोले पर्याप्त हावा लिन सक्दैन। शरीरका सम्पूर्ण अंगमा अक्सिजनको अभाव हुन्छ।
‘नियमित रूपमा फोक्सोले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि शरीरमा अक्सिजनको लेबल घट्छ। किन अक्सिजन बढि चाहिएको छ भन्ने विषय अहिले अध्ययनकै क्रममा छ। तर, के आंकलन गर्न सकिन्छ भने अहिले नयाँ भेरियन्टमा केही छ जस्तो लाग्छ। पहिलाको भन्दा कडा हो कि जस्तो लाग्छ’ डा. पुन भन्छन् ‘अर्को कारण विभिन्न अनुसन्धानमा युवा वर्गलाई बढी मात्रामा अक्सिजन चाहिने देखिएको छ।’
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार अक्सिजन चाहिने बिरामीको संख्या बढ्नुमा दैनिक संक्रमितको उच्च हुनु हो।
‘संक्रमित संख्या बढेसँगै गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पनि बढिरहेका छन्। जसका कारण अक्सिजनको माग बढ्दो छ,’ उनी भन्छन्। समुदायमा व्यापक रूपमा संक्रमण फैलिएका कारण अस्पताल भर्ना हुने र अक्सिजन चाहिने बिरामीको संख्या अझै बढ्ने चिकित्सक बताउँछन्।
‘पहिलाको भन्दा अहिले संक्रामक भाइरस छ। जसले गर्दा पनि अक्सिजन चाहिरहेको छ,’ डा. सुवेदीले भने।
नेपालमा अहिले फैलिरहेको भाइरस युके तथा भारतीय भेरिअन्टले धेरै संक्रमण बढाइरहेका छन्।
‘‘डबल म्युटेंट’ भाइरसले बढी संक्रामक हुन्छ। जसले गर्दा अधिकांशलाई अक्सिजन आवश्यकता पर्छ,’ भाइरोलोजिष्ट डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, ‘ पहिलाको भन्दा अहिले संक्रमित धेरै समय अस्पताल बस्नुपरेको देखिएको छ।’
कोरोनाको पहिलो लहरको तथ्यांकलाई हेर्दा साधारणतया ८० प्रतिशत बिरामी बिना लक्षणका थिए। १५ प्रतिशतलाई अक्सिजनको आवश्यकता र ३-५ प्रतिशतलाई आइसियु तथा भेन्टिलेटरको जरूरत पर्थ्यो।
तर, अहिले भाइरसको प्रकृति फरक छ। जसका कारण अस्पतालका भर्ना भएका सबैलाई अक्सिजन चाहिएको छ।
‘परीक्षण गरिएको मध्ये ५० प्रतिशतलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले फैलिएको भाइरस निकै घातक छ। अन्य देशको घटना हेर्दा छिट्टो संक्रमण हुने र चाँडै अक्सिजन लेबल घटेर जाने देखिएको छ। पहिलाको भन्दा मृत्युदर पनि बढेको देखिएको छ,’ डा. पाण्डेले भने।
संक्रमणदर घट्न अझै समय लाग्छ
नेपालमा निषेधज्ञा लगाएको दुई हप्ता पुग्न लागेको छ। तर, संक्रमणदर घटेको छैन।
आइतबार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा थप ८ हजार ८ सय ५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
देशभर ८८ हजार १६० सक्रिय संक्रमितमध्ये ८१ हजार ४३० होम आइसोलेसन र ६ हजार ७ सय ३० संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ।
अस्पतालमा रहेकामध्ये ८३२ जना आइसियूमा र २६७ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्।
अहिले कुल परीक्षण मध्ये दैनिक ४५ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा अझै एक महिना निषेधज्ञा वा लकडाउन नै गर्नुपर्छ।
बाहिर चहलपल कम भए पनि घरभित्रैबाट संक्रमण फैलिरहेको उनीहरूको भनाई छ।
‘भारतबाट आएका व्यक्तिलाई उचित तवरले व्यवस्थापन गर्न सकिएन। जुन संक्रमण घर–घर सम्म पुग्यो,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले निषेधाज्ञाले संक्रमण बढाएको छैन। घरभित्रबाट नै संक्रमण फैलिरहेको छ।’
डा. पाण्डेका अनुसार निषेधाज्ञाले मात्रै संक्रमणदर रोकिँदैन।
संक्रमणदर घट्न अब दुई कुराले मदत गर्नसक्छन्–
समुदाय स्तरमा ६०-७० प्रतिशत संक्रमित हुन।
अर्को खोपको पहुँच सबैलाई हुनुपर्छ।
शरीरमा ‘इम्युनिटी पावर’ बढेसँगै संक्रमण केही हदसम्म घट्ने डा. पाण्डेको अनुमान छ।
‘खोप लगाएका पनि पुन संक्रमण हुने सम्भावना रहन्छ। तर, खोपले गम्भीर अवस्थामा सम्म पुर्‌याउँदैन’ डा. पाण्डे भन्छन्।
साधारणतया संक्रमणको समयको १४ दिनको हुन्छ। तर, एक संक्रमितले व्यक्तिले तीन जनालाई संक्रमण सारेको पाइएको छ।
‘गाँउ–गाउँबाट नै आइसियु र भेन्टिलेटर चाहियो भनेर सम्पर्क गरिराख्नु भएको छ। अहिलेको यो कोरोनाको अवस्थालाई हेर्दा अझै नेपालमा संक्रमण दर घट्न डेढ महिनाभन्दा बढी लाग्छ,’ डा. पाण्डेले भने।